Maxaa iska badalay habdhaqanka askarta Soomaalida? - BBC News Somali
Dalka Soomaaliya ayaa soo maray waayo kala duwan iyo waqtiyo kala gadisan, waayihii cakirnaa iyo waqtiyaddii qarraaraa waxyaabbaha laga xusuusta ayaa waxa kamid ah inay luntay quwaddii difaaca dalka lagana irdhoobaay dookhii ku saabsanaa Askarinimada kaas oo ahaa haybad iyo hanaan bulsho oo ku qotomo ilaalinta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxaa lumay aaminaadii lagu qabay Askari nooca uu doono ha ahaadee, waxaana soo ifbaxay aragti kusaabsan in ciidannimadu tahay wax lanaco oo leh dhibaato joogta ah, alle ka fogaanshiyo, iyo inkaar dad weyne, waxaana sawirkaas bixiyay dadkii qoriga u isticmaalay mid lagu ugaarsado dadka laguna boobo dadkii mudnaanta u lahaa in lagu ilaaliyo, maantase waxaa muuqato rajo iyo isbaddal dhab ah.
Haddaba maxaa iska badalay aragtidaas?
BBC-da ayaa la xiriirtay dad kala duwan, waxaana la'isla qirey in uu jiro waxoogaa isbadal ah oo kasoo kabashao ah, iyada oo ay aad hoos ugu dhaceen falalkii amni darada ay askarta dowladda geysan jireen, haddii ay ahaan lahaayeen dil, dhac, kufsi iyo waliba anshax darro kale.
Marka ay wax isbadalaan, waxaa markasta jiraya sababo loo tiirin karo isbadalkaas.
Sababaha farta lagu fiiqayo waxaa ka mid ah in dhallinyaro wax baratay ay si joogto ah ugu biirayaan ciidamada qeybahooda kala duwan, kuwaas oo ka fayoow noocyada balwadda ee askarta lagu aqooni jiray sannadihii dambe.
Waxaa arrintaas qaba Maxamed Cabullaahi Maxamed (Tuulax), oo ah mas'uulka amniga ugu sareeya ee gobolka Banaadir "Waa dhalinyaro jaamiciyiin ah, oo dhallintii xaafadaha ah, dadkuna ay aad u yaqaanaan , xaafad kastana waxaa loo keenay ciidan ay si fiican u garanayaan, oo aan xitaa balwad lahayn"
Mid ka mid ah dhagaystayaasha BBC oo lagu magacaabo Falastiin Khalif Yusuf ayaa tiri, "Ciidamada oo helay tababar ku filan haday ahaan lahayd mid ay dalka ku qaten iyo dibada.Dowlda oo xogga sartay tayaynta cidanka iyo bixinta mushar kooda taa oo yareysay ciidamadii dadka dhibateynjirey . Shacabka oo wada shaqayn dhow la yeeshay halka awal ciidamada iyo dadka shacabka ah ay kala shakin jireen."
Maxamed Cabullaahi Maxamed (Tuulax), guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee xagga amniga ayaa BBC-da u sheegay in uu jiro isbadal weyn "Isbadalo badan ayaa ka dhashay xagga amniga, bishii hadda lasoo dhaafayna jawaabo wanaagsan ayaa shacabka nooga yimid, si wanaagsan ayayna u wada falgaleen ciidanka iyo shacabka", wuxuu intaas ku daray "Ciidanka hadda magaalada ka hawlgalaya waa mid ay shacabka aad u amaaneen, xitaa la macaamilkooda, kuli tabobar ayaa dib loogu celiyay, intii dhaqanka xumeydna waa laga saaray".
Sida ay dowladda federaalka dhawr jeerba sheegtay, musharaadka ciidanka ee sida joogtada loo bixinayo ayaa sidoo kale ka qeybqaatay in ay dhawraan anshaxa ciidanka.
Inkasta oo su'aalo badan la'iska weeydiin karo illaa heerka ciidamadda waajibaadkooda sugista amniga guud u gudanayaan, haddane waxa dadka aan aragtidooda weeydiinay ay tilmaamayaan in uu jiro isbadal xitaa dhanka dareeska ah, waxayna sheegeen in xitaa ay xiranyihiin dhar nadiif ah oo feereysan.
Sababta ugu weyn ee isbadalka ciidanka ayaa lagu sheegay in ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo si joogto ah dabogal ugu samaysa, xukunana ugu ridda askarta dhibaatooyinka u geysta shacabka.
Taas lafteeda waxa ay leedahay dhinac mugdi ah sida ay horey u sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, taas oo tibaaxday in maxkamaddani ay riddo xukuno aan waafaqsanayn xuquuqaha asaasiga ah ee askarta.
Ugu dambeyntii tabobarada joogtada ee ciidanka la siiyo, ayaa iyana la leeyahay, waa laga yaabaa in ay ugu wacantahay isbadalka ku yimid hab dhaqanka askarta Soomaaliya.
Muuqaal, Dareenka Hooyo Soomaaliyeed oo afar sanno ka hor Trump ka baajiyay safarkeedii, Muddada 2,08
9 Nofembar 2020
Muuqaal, Daawo: Fanaan Baastow oo waaiyihiisa ka sheekeynaya, Muddada 2,54
2 Juunyo 2022
Muuqaal, Gabar Soomaali ah oo Shiinaha macalim ka ah, Muddada 2,45
Dhageyso, BBC-da oo u kuurgashay abaarta ka jirta Nugaal, Muddada 4,45
Dhageyso, Stadium Muqdisho: Garoonkan oo lagu qabanayo tartan kubadda cagta ah, Muddada 3,28
23 Maajo 2021